Imakethe Yezimpahla Zezemidlalo: I-Business Outlook 2021-2026 Umbhali: | I-Adidas, iNike, iPuma, iyunifomu, i-ASICS, i-Columbia, i-North Face, iPatagonia, iBurton, izinja zasemaphandleni, i-montbert, iWoer Kang, i-United States ne-As ...
Umbiko we "Global Sportswear Market", owenza ucwaningo olunzulu, weqe izinga lokwandiswa kwemakethe ngesikhathi sayo sokubikezela. Ukuhlinzeka ngokubuka konke okusheshayo, lo mbiko ufaka usayizi kanye nokulinganiselwa kwemakethe yezingubo zomhlaba wonke ngesikhathi sesimo sezulu. Ngokungeziwe ...
Umbono wesikhathi esizayo wezibalo zokukhula embonini yezemidlalo yezemidlalo ye-baseball ngo-2020 Nike, Adidas, Under Armor, Puma
"Umbiko we-Global Baseball Sportswear Market Report" unikeza imininingwane ebalulekile ngezindlela ezikhona nezingaba khona embonini, ukuze abafundi babe nokuqonda okuphelele ngemikhiqizo yezimakethe, futhi babasize babone amathuba okutshala imali athembisayo nezinye izinto ...
U-sis Malaika Arora uvumela u-Amrita ukuthi enze i-yoga ngezingubo zangaphansi zemidlalo ezingenamhlane nezikhindi
U-Amrita Arora nodadewabo uMalaika Arora bayimiqemane, akunakuphikwa lokho. Ngaphambi kokuba ubhadane luqale, ngemuva kokuzivocavoca kanzima, lab 'odade ababili babevame ukutholakala ngaphandle kwenkundla. Ngisho nangesikhathi salo bhubhane, la madoda amabili awazange ayeke ukuzivocavoca, kanye nesitatimende sakamuva sika-Amrita ku-Instagram ...
Usomabhizinisi omncane udala ukubhukuda kwe-Outplay nezimpahla zemidlalo
UMnuz Marialexandra Garcia ongumnikazi webhizinisi elincane ozalelwe eVenezuela uhlala ePalmetto Bay (Palmetto Bay) futhi wasungula ukubhukuda nezimpahla zezemidlalo ze-Outplay Gender Neutral. I-Outplay wumkhiqizo wokubhukuda nowezemidlalo onenhloso yawo wukwenzela abantu “izingubo ezingagculisekile ngendabuko ...
Izinzuzo zomzimba ze-yoga yokubhukuda zingaphezulu kakhulu kokupholile elangeni lasehlobo
I-Yoga ayinayo imithetho eqinile. Iphuzu eliphelele lokuzivocavoca ukwenza umzimba wakho uzizwe kamnandi - ukwengeza iphuli ku-equation akukwazi ukukusiza nje ukuthi wehlise ukushisa kwehlobo, kepha futhi wenze okuningi. “I-Pool Yoga isebenzisa ithuba lokumelana namandla okudala amanzi ukudala i-tota ...
URHONY alumni uKelly Bensimon ukhombisa umzimba wakhe onethoni efake ubhodisi wezemidlalo nesikhindi ngenkathi egijima eNew York City
Le nkanyezi engokoqobo eneminyaka engama-52 ibukeka inhle ngesudi yezemidlalo enebhodisi lezemidlalo elimnyama nezikhindi. IJogging City: NgoMsombuluko, uKelly Bensimon ubukise ngomakhi wakhe odumile ngenkathi egijima eManhattan Ubematasa egijima, ene-Apple Airpods ezindlebeni zakhe, efihlwe ngaphansi kwezinwele zakhe ezimhlophe zegolide, i-wav yakhe ...
Ama-Lupulemon ama-Dupes amahle kakhulu we-Yoga, Ukugijima nokuningi
I-Us Weekly inobudlelwano bokusebenzisana ngakho-ke singathola isinxephezelo ngokuxhumana okuthile nemikhiqizo nezinsizakalo. Simncoma noma ngubani oqhwaza ezintweni azithandayo - noma ngabe kungama-leggings alula! Kungenzeka ukuthi uthathe i-plunge wathenga i-Lululemon leggings, noma ku-l ...
Engikuthandayo uqobo yi-Beyond Yoga's Spacedye leggings
Yonke into ekuleli khasi ikhethwe umhleli we-ELLE. Singathola ikhomishini kwezinye zezinto okhetha ukuzithenga. Impela, i-yoga leggings yenzelwe i-yoga yangempela, kepha amabhulukwe alulekayo nawo alungele labo abenza okuncane kakhulu. Zihlanganisa ngokuphelele indlela yethu yokuphila yamanje yokubheja okuhambayo ...
Izingubo Zokuzivocavoca Ezihamba Phambili Zabesifazane: Amazwi Angaphandle, i-Alogear Yoga nokuningi
I-CNN Underscored iyisiqondisi sakho semikhiqizo nezinsizakalo zansuku zonke ezikusiza ukuthi uphile impilo ehlakaniphile, elula negculisayo. Okuqukethwe kudalwe yi-CNN Underscored. Abasebenzi be-CNN News ababandakanyi. Uma uthenga, sithola imali engenayo. Sezadlula izinsuku zokusebenza esikhwameni ...